Nepal Deep | निषेधाज्ञाका बीच बन्द छ श्रीपशुपतिनाथ बाबाको दरबार ! [तस्बिरहरु]
निषेधाज्ञाका बीच बन्द छ श्रीपशुपतिनाथ बाबाको दरबार ! [तस्बिरहरु]
मंगलबार, बैशाख २१ २०७८
काठमाडौँ। कोरोना महामारीको दोश्रो लहरले नेपाल आक्रान्त छ। स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान लागेको विज्ञ चिकित्सकहरुले बताउन थालेका छन्। यस्तो भयावह अवस्थामा सबैका आशा र भरोसाका केन्द्र आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथ मन्दिर पनि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै बन्द भएको छ।
नित्य पुजा बाहेकका सम्पूर्ण गतिविधि बन्द भएको छ। तर पशुपति मन्दिरको पूर्व बागमती गंगाको घाटमा भने शबहरु जल्न छोडेका छैनन्। मानव निर्मित समाज ठप्प भए पनि भागवद् निर्मित यो चराचर जगत चलायमान छ।
अझ अहिले त कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरुको संख्या अत्यधिक बढेकोले खुल्ला ठाउँमा नै शबहरुलाई जलाउन थालिएको छ। यसअघि पशुपति स्थित विद्युतिय शव गृहमा मात्र संक्रमितहरुको शब जलाउने गरिएको थियो।
कोरोनाले मृत्यु पनि उस्तै निर्मम दिएको छ। रोग सर्ने डरले मृत्यु संस्कार बिनै मृतकको शरीर जलाइएको छ। आफ्ना प्रिय-आदरणीयको शरिमा दागबत्ती दिनबाट पनि आफन्तहरु बन्चित छन्।
पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पहिले भगवान शंकरको स्वर्ण दरबार थियो। सत्य युगमा रावण आएर यसको गरिमा देख्यो। तत् क्षण उसको मनमा यस्तै दरबारमा बस्ने लोभ मनमा पलायो। रावण ब्राह्मण पुत्र भएकोले उसले सोचेपछि पुग्नु अनिवार्य थियो।
यो कुरा सर्वज्ञ भगवान पशुपतिनाथलाई थाहा नहुने कुरै थिएन। उहाँको लागि स्वर्णको दरबार र मसानघाटमा कुनै अन्तर जो थिएन। ब्राहमणको मनमा लोभ पलाएको देखे पछि युग परिवर्तनको समय भएको बुझी भूत भोलेनाथले स्वर्ण दरबार लंका लैजान रावणलाई आग्रह गर्नु भयो।
र, आँफू पशुपतिनाथ भएर अन्तरयामी स्वरुपमा यही ठाउँमा बस्नु भयो।
पशुपतिनाथ क्षेत्रको महिमा अपरम्पार छ।
यो महामारीको समयमा पशुपति जान बाट बन्चित हुनु भएका भक्तजनहरुको लागि पशुपतिनाथ क्षेत्रको अहिलेको तस्बिर क्यामरामा कैद गर्ने प्रयास गरेका छन् नेपालदीपका फोटो पत्रकार दिपक घर्ति मगरले।